Kuleli zwe lanamuhla, umfutho ophakeme wegazi akuyona into engavamile. Tinnitus, ubuthakathaka jikelele, isiyezi, migraine - lokhu kuyinto uhlu akuphelele izimpawu ezihambisana lokhu egunjini lokuhlolwa kwezifo. Isiguli uye linganciphisa umthamo wamandla umsebenzi, kufanele nomkhawulo ngokwawo ukucindezeleka ngokomzimba nangokwengqondo. nesineke abanomfutho wegazi ophakeme uphoqelekile ukuba sihlale njalo siqaphele imenyu yabo, ngisho engenangozi Uma unganakile, inkomishi yekhofi ungakwazi uhlaselwe uvalo.
Letha ingcindezi izinga izidakamizwa usizo. Noma kunjalo, ukwamukela izidakamizwa kuyabiza futhi kudinga ukuqapha njalo. Ngesikhathi esifanayo amakhambi abantu ngoba umfutho ophakeme akayena kancane kunokuphakela izidakamizwa, futhi zihlala esandleni. Ngokwesibonelo, indwangu zihlaliswe kuviniga, exhunywe kwamathe ezinyawo zakhe, imizuzu eyishumi nanhlanu kudambisa isimo sezinhlekelele abanomfutho wegazi ophakeme.
amakhambi Folk-high blood pressure - isetshenziswa kusukela kudala iminyundu. Izinqubo nesicelo sabo umzimba lesiguli abizwa ngokuthi hirudotherapy. Basuke asetshenziselwa ukwelapha izifo eziningi, kuhlanganise nomfutho wegazi ophezulu. It is wafakazela ukuthi ngesikhathi umzokwe yakhe bite iqondiswa egazini isakhi esithile esikhethekile - gerudin. Lokhu anticoagulant kusiza ekwehliseni igazi viscosity. Ngenxa yalokho, wayeka by ukuhlaselwa abanomfutho wegazi ophakeme futhi aqede zokugula uqobo.
amakhambi Folk ngoba Umfutho ifa eziningi eziwusizo abalulekile phezu ejenti kwemithi. Okokuqala, zokupheka wabelaphi okunye zisekelwe imikhiqizo yemvelo. ukhetho olukhulu amakhambi emvelo ikuvumela ukuthi ukhethe yibo okufaneleka kakhulu kunokunye. kungenziwa Ngesikhathi amakhambi okufanayo izimali yezokwelapha sithenge ngokuzimela. Izintaba futhi nomthelela nenzuzo empilweni yomuntu. Futhi ke isici esibaluleke kunazo yilokhu amakhambi abantu-high blood pressure ayatholakala. Futhi abaningi babo bangabantu njalo endlini.
iphathwa ngempumelelo nomfutho wegazi ophezulu amakhambi abantu. Ukuqeda isifo ingalungiswa ngengxube ezimbili izinkomishi uju, esilinganayo viburnum amajikijolo kanye ingilazi ulamula olwembiza. Umfutho ophakeme wegazi kanye nomunye iresiphi lingasetshenziswa. Epanini ukubeka uju inani ingilazi eyodwa, esilinganayo lemon oqoshiwe, isanqante beetroot juice. Kukhona futhi abeke imibengo horseradish impande. Inani layo kumele kube 0.5 inkomishi. Ngemva ukumnika amahora amane umuthi ilungele ukusetshenziswa.
Zuza amakhambi ingcindezi-Folk, kukhona Izingxube imikhiqizo ehlukahlukene. Kungenzeka ezimbili izingilazi cranberry, osugugile nge ezintathu wezipuni ushukela. Lesi sidakamizwa esithathwayo nge nomfutho wegazi ophezulu, bekungenxa omnene. Lapho zokugula esiteji lokuqala nelesibili elixutshwe kuyakuba khona izimbizana ezine beet juice ne ivolumu efanayo uju. Yengezwe ingxube eziyikhulu amagremu marsh cudweed futhi isigamu ilitha likagologo.
amakhambi Folk-high blood pressure - iyona umpe chokeberry futhi blackcurrant. Ngempumelelo nge nomfutho wegazi ophezulu umhluzi kusukela amajikijolo Viburnum. Kunganciphisa umfutho wegazi ophakeme esikhathini izikhumba wabhaka amazambane, ikhabe, uju, garlic kanye no-anyanisi.
Gostyukhin Vladimir Vasilievich: ikusasa lokudala lomdlali
Umqondisi Art PMIBar Katya Klyayn: Biography, umndeni, amaqiniso athakazelisayo
Indlela yokwenza mushroom eziyizimbangela: zokupheka ezine